Mid Ka Eeg Qaranimada!! | HimiloNetwork
Mid Ka Eeg Qaranimada!!
Posted by: Zakariya in Wararka February 27, 2016	0 308 Views
Muqdisho (Himilonews) –Wadaagista dano iyo dareen qoto dheer oo lagu ilaashado dhul jugraafi ahaan ay u wada leeyihiin ummad ka mideysan aragti, iimaan ama dhalasho ayaa lagu magacaabaa qaranimo. Wadaniyadduna waa midda ku xoojisa qaranimada in loo dhinto ugu badnaan: loo dhaawacmo ugu yaraan—lagana dhiilloodo wax-yeelisteeda.
Qaranimadu waa mid kamid ah asbaabihii sababay dagaalladii koobaad iyo labaad—halkaas oo wax ka badan 50 malyuun ay ku dhinteen.
Balse taasi waa dhinaca sirgaxan. Marka aynu ka eegno dhinaca togan, qaranimadu waa tan mideysa kartida maskaxeed ee wax soo saarka iyo hannaan socodka nololeed ee horumarka mujtamaca.
Qaranimadu waa tan horseedda isu-geynta qofnimada bulshada si loo helo qoys mida oo hal udub ku istaagsan.
Kadib helista qaran, waxay ka dhigantaa fahamka dowladnimada iyo hadafka dowladi dadkeeda u leedahay taas oo ah in yoolka ugu weyn ee dowladi u jirtaa ay noqoto u raaxeynta iyo u horseedidda nolol barwaaqo leh bulshadeeda, sida uu yiri Thomas Jefferson oo kamid ahaa aabayaashii helay qaranimada Maraykanka.
Soomaaliya, ereyga qaranimo wuxuu kusoo baxay dhawaaqiisa bilashadii gobanimo-u-dirirka halkaas oo halgamayaashii umadda ay dadaal dheer u galeen hanashada qaran Soomaaliyeed oo xor ah iskuna taliya.
Hayeeshe, kadib ku naaloonshaha 31-sano oo qaran lagu dhaashaday, Soomaaliya waxay dib ugu noqotay qola-qolaysi iyo qabyaalad.
Maanta wax ka badan 20-sano oo laga joogo burburkii, dalka jiilka hana-qaaday waxay lasoo if-baxeen wada noolaansho cusub taas oo ka dhalatay isku dhignaantooda nololeed oo wali caad-yaal u ah sida ay qaranimadu u nooshahay.
May dhiman qaranimdu.
Zakariya Hassan Muhumed.
Previous: Hal mid iska weydii Singapore?!
Next: Layaab: Daanyeer cabsan oo mindi ku weeraray dad kula sugnaa baar lagu khamri-cabo.
Daawo – Tartan Dharbaaxada oo ka dhacay Ruushka.
Bulshada iyo Han-fahmeedka Deegaaneed!!
Muslim adduun dhan £850,000 ugu deeqay Jaamacadda Cardiff.